Amatikiti amaxabiso aphantsi oLoliwe e-Eurostar kunye namaxabiso okuHamba | Gcina A Isitimela
Amatikiti amaxabiso aphantsi oLoliwe e-Eurostar kunye namaxabiso okuHamba
ekhaya > Amatikiti amaxabiso aphantsi oLoliwe e-Eurostar kunye namaxabiso okuHamba
Apha unokufumana lonke ulwazi malunga Amatikiti kaloliwe angamaxabiso aphantsi yaye Amaxabiso okuhamba e-Eurostar kunye nezibonelelo.
izihloko: 1. I-Eurostar ngamaNqaku oLoliwe oPhezulu
2. Malunga ne-Eurostar 3. Amagqabantshintshi aphezulu ukuze ufumane iTikiti leTropiki loThengiso lwe-Euro
4. Axabisa malini amatikiti e-Eurostar 5. Kutheni kungcono ukuthatha uloliwe wase-Eurostar, kwaye ungahambi ngenqwelomoya
6. Yintoni umahluko phakathi komgangatho, INkulumbuso esemgangathweni kunye neNkulumbuso yeShishini kwi-Eurostar 7. Ngaba ikhona urhumo lwe-Eurostar
8. Ixesha elingakanani ngaphambi kokufika 9. Zeziphi iishedyuli zoololiwe ze-Eurostar
10. Zeziphi izitishi ezihanjiswa yiEurostar 11. I-FAQ yombuzo
I-Eurostar ngamaNqaku oLoliwe oPhezulu
Inkampani ye-Eurostar yasungulwa ngomhla we-14 kaNovemba 1994
Olunye koololiwe abakhawuleza kakhulu eYurophu yiEurostar, Isantya esifikayo kwi-Eurostar ngu-320km ngeyure
Umjelo weSiteshi se-Eurostar ngu 50.45 km ubude okanye 31.5 iimayile. Iyafana 169 I-Eiffel Towers ibekwe apha ngasentla enye nenye
2h15 yexesha lokuhamba phakathi kweParis neLondon ekhwele kwi-Eurostar
Xa usiya kwi-Eurostar ukusuka e-UK ukuya eYurophu, une 1 iyure yabuya ngexesha
Ukuwela umjelo weThaneli kuthatha 35 imizuzu
Izitimela ezihamba ngesantya esiphezulu se-Eurostar yinkonzo edibanisa iNtshona Yurophu ukuya eLondon naseKent e-United Kingdom, Unxibelelwano oluvela eYurophu yiParis naseLille eFrance, EBrussels, kunye neAntwerp eBelgium, IRotterdam neAmsterdam eNetherlands. kwakhona, ungahamba ngololiwe ukusuka eLondon ukuya eDisneyland Paris (Isikhululo sikaloliwe iMarne La Vallee Chessy) kwaye kwakhona Iindawo ekuyiwa kuzo ngexesha elithile eFrance njengeMarseilles neMoutiers kwiiFrench Alps. Zonke izitimela ze-Eurostar ziwela iChannel yesiNgesi ngeThaneli yeThaneli.
the Inkonzo yoololiwe ye-Eurostar oololiwe abahambayo bade benyuka 320 km ngeyure kwimigca yesantya esiphezulu sikaloliwe. Oko i-Eurostar yaqala ukusebenza ngaphakathi 1994, imigca emitsha yakhiwe eBelgium nase-UK ukunciphisa amaxesha ohambo phakathi kweendawo ze-Eurostar. Iprojekthi yeThaneli yeThaneli yoLoliwe yeZitishi ezibini yagqitywa ngomhla we-14 ku-Novemba 2007, xa i-terminal yase-London ye-Eurostar yahanjiswa ukusuka e-Waterloo International ukuya ILondon St Pancras yamazwe aphesheya Isikhululo sikaloliwe.
Yiya e Gcina iKhaya leLoliwe okanye usebenzise lewijethi ukukhangela Uqeqesha amatikiti e-Eurostar
Amagqabantshintshi aphezulu ukuze ufumane iTikiti leTropiki loThengiso lwe-Euro
inombolo 1: Bhuka amatikiti akho e-Eurostar kwangaphambili kangangoko unakho
Amatikiti kaloliwe e-Eurostar ziyafumaneka phakathi 3 iinyanga ukuya 6 kwiinyanga ezingaphambi kokuba ahambe ngololiwe. Amatikiti kaloliwe okubambisa ngaphambi kwexesha qinisekisa ukuba ufumana awona matikiti ashibhileyo kwaye amatikiti asezantsi e-Eurostar anqabile kakhulu. Amatikiti ezitimela zase-Eurostar amaxabiso anyuka ngexabiso njengoko usondela kumhla wokuhamba, ukuze yonga imali ngokuthenga kwakho amatikiti, uku-odola kangangoko kunokwenzeka kwangaphambili.
inombolo 2: Ukuhamba yi-Eurostar kumaxesha e-off-kiley
I-Eurostar, amaxabiso etikiti awabizi ngexesha lokuphumla, ekuqaleni kweveki, nasemini. Embindini weveki uhambo lukaloliwe (uLwesibini, NgoLwesithathu nangoLwesine) ihlala inikezela ngamaxabiso aphantsi. Ngamaxabiso aphezulu, ungathathi i-Eurostar ekuseni kakhulu nangokuhlwa kwangoko evekini (ngenxa yabahambi abaninzi beshishini), kananjalo uphephe ukuthatha i-Eurostar ukukhwela ngoLwesihlanu kunye nangeCawa ngokuhlwa (ifanelekile iimpela-veki zokufika), ngexesha kwiiholide zikawonke-wonke nangeeholide zesikolo amaxabiso e-Eurostar skyrocket.
inombolo 3: Hlela amatikiti akho e-Eurostar xa uqinisekile ngeshedyuli yakho yokuhamba
Inkonzo yoololiwe base-Eurostar ikwimfuno ephezulu kwaye okwangoku, Kuphela yinkampani kaloliwe ye-Eurostar eqhuba oololiwe kwitonela ye-English Channel, ke, akukho khuphiswano. I-Eurostar ibe kuphela komqhubi kaloliwe kwimizila ephakathi kweNgilani kunye neNtshona Yurophu usethe umda othile kwitikiti. Luhlobo lweNkulumbuso yeShishini kuphela olunokutshintshwa, amanye amatikiti kaloliwe awanakho ukutshintshiselana okanye abuyiselwe, kodwa kukho iiforamu kwi-intanethi onokuthi uzithengise amatikiti akho ololiwe ngolwesibini. ke, Gcina isindululo soQeqesha Ukuhamba kwe-Eurostar Kukubhuka xa uqinisekile ngeshedyuli yakho yokuhamba.
inombolo 4: Thenga amatikiti akho e-Eurostar kuKhuseleko loLoliwe
Gcina i-Aoliwe ineyona minikelo mikhulu yamatikiti oololiwe eYurophu nakwihlabathi liphela, kwaye ngenxa yamandla ethu, sifumana amatikiti ashibhileyo e-Eurostar. Sidibene nabaqhubi boololiwe abaninzi kunye nemithombo kunye neetekhnoloji zethu ze-algorithms zikunika amatikiti ashibhile e-Eurostar kwaye ngamanye amaxesha nokudityaniswa kwabanye abaqhubi boololiwe kwezinye iindawo.. Sisenokufumana ezinye iindlela kwi-Eurostar.
Amsterdam ukuya eLondon amatikiti kaloliwe
I-Paris ukuya eLondon amatikiti kaloliwe
I-Berlin iya eLondon kwitikiti lamatikiti
Ibrussels ukuya eLondon ngamatikiti kaloliwe
Axabisa malini amatikiti e-Eurostar?
Amanani etikiti anokuqala kwi- € 35 ngexesha lokunyusa kodwa unokufikelela kwi- € 310 ngomzuzu wokugqibela. Amaxabiso e-Eurostar kuxhomekeka kwiklasi oyikhethileyo. Nalu uluhlu olushwankathela amaxabiso aphakathi kwiklasi nganye eLondon-Paris / ILondon-Brussels / ILondon-Amsterdam uhambo:
Imigangatho 35 € – 190 € 68 € – 380 €
INkulumbuso esemgangathweni 96 € – 290 € 190 € – 490 €
INkulumbuso yoShishino 310 € 600 €
ILondon ukuya eBrussels ngololiwe
London to Paris ngololiwe
Lille ukuya eLondon ngololiwe
ILondon ukuya eAmsterdam ngololiwe
Kutheni kungcono ukuthatha uloliwe wase-Eurostar, kwaye ungahambi ngenqwelomoya?
1) Inzuzo yokuhamba kwe-Eurostar kukuba uhambe kwaye ufike ngqo kumbindi wesixeko nakwezinye izixeko ohamba kuzo, Le nto yahluke kakhulu kuloliwe, ke ukuba uqeqesha uhambo olusuka eParis, EBrussels, eAmsterdam, Rotterdam, Antwerp, ILille okanye iLondon le sisibonelelo esikhulu kwi-Eurostar. Xa kuziwa Amaxabiso e-Eurostar, ihlala ihluke. Ezinye izinyuselo zikuvumela ukuba ufumane amatikiti ashibhile e-Eurostar. Kodwa ngeentsuku zokugqibela ngaphambi kokumka, amaxabiso aya esonyuka. Ukuba uthanda ukuhamba ngokugqibeleleyo, I-Eurostar yeyakho!
2) Ukuhamba ngenqwelomoya ngenqwelomoya kuneenkqubo zokhuseleko zesikhululo, kwaye oko kuthetha ukuba kufuneka ubuncinci 2 iiyure phambi kokumka kwakho ocwangcisiweyo, nge-Eurostar kufuneka ulunge 1 iyure kwangaphambili. kwakhona, Kuya kufuneka uye kwisikhululo seenqwelomoya ukusuka kwiziko ledolophu. Ke ukuba ubala lonke ixesha lokuhamba, I-Eurostar ihlala iphumelela ngexesha lokuhamba lilonke.
3) Ngamanye amaxesha amaxabiso kaloliwe aphakama ngaphezulu kunendiza enqwenelekayo kwitikiti lobuso, kodwa ukuthelekisa kufuneka kubandakanya, Ixabisa malini ukuthatha iindlela zokuhambisa kwisikhululo seenqwelomoya, Ngaphandle kwezinye iimeko ufumana nexesha lokuphumla xa ukuhamba yi-Eurostar, okokugqibela nge-Eurostar awunayo imirhumo yemithwalo.
4) Iinqwelomoya sesinye sezizathu zokungcoliswa okuphezulu komhlaba, kwinqanaba lokuthelekisa, oololiwe Indawo enobuntu kakhulu, kwaye ukuba uthelekisa inqwelomoya ngenqwelomoya, Ukuhamba ngololiwe kungaphantsi kwe-20x yecarbon polluter kuneenqwelo moya.
Ithikithi laseLuxembourg ukuya eLondon
Iitikiti zase-Antwerp eziya eLondon
Rotterdam ukuya eLondon amatikiti
Itikiti laseLyon ukuya eLondon
Yintoni umahluko phakathi komgangatho, INkulumbuso esemgangathweni, kunye neNkulumbuso yeShishini kwi-Eurostar?
Oololiwe be-Eurostar baneenkonzo zeklasi ezininzi ezenzelwe naluphi na uhlahlo-lwabiwo mali, kwaye naluphi na uhlobo lokuhamba, nokuba ungumhambi weshishini okanye ukuzonwabisa okanye zombini 🙂
Amatikiti asemgangathweni e-Eurostar:
the Itikiti eliqhelekileyo le-Eurostar yeyona nto inexabiso eliphantsi kuyo yonke imali yokuthenga. Kungcono ukubhukisha eli litikiti lesitimela ngaphambi kwexesha, ngenxa yamatikiti asezantsi amaxabiso asezantsi – bathengisa ngokukhawuleza. Abahambi abanetikiti eliqhelekileyo banokuthatha 2 Iityesi + 1 baphathe iimpahla zasimahla. Abakhweli kwiiTikiti zeMigangatho ye-Eurostar banokonwabela i-WiFi yasimahla kunye nokhetho lwesihlalo. Amatikiti asemgangathweni ikakhulu awahlawulwa.
Amatikiti eNkulumbuso emiGangatho ye-Euro:
Eli klasi lamatikiti libiza kakhulu kunodidi lweetikiti zaseMgangathweni, i Itikiti leNkulumbuso ibonelela ngeenkonzo ezongezelelweyo. Ukongeza kwizibonelelo zamatikiti omgangatho esiwabhale ngasentla, Amatikiti eNqanaba leNkulumbuso anikezela ngezihlalo ezifanelekileyo ngegumbi elingaphezulu lomgangatho, ukhetho olubanzi lweemagazini kunye namaphephandaba anikezelwa simahla, kwaye ufumana ukutya okulula kunye neziselo kwisitulo sakho esikhwele i-Eurostar. Amatikiti eMigangatho yeNqanaba ayatshintshwa ngomrhumo ngokuxhomekeke kwindawo oya kuyo.
Amatikiti eNkulumbuso ye-Eurostar:
the Itikiti leNkulumbuso ye-Eurostar abathengi banokuzonwabela zonke izibonelelo esizibhale apha ngasentla kodwa, Abakhweli kwiNkulumbuso yeShishini yase-Eurostar baya kuxhamla kuyo 3 iingxowa zemithwalo endaweni ye 2, Imenyu eshushu eshushu eyilwe ngumpheki owaziwayo uRaymond Blanc, Abakhweli beNkulumbuso yeShishini banokuzonwabisa kwigumbi lokuphumla ngaphambi kokukhwela uloliwe kwindlela eya eLondon okanye ukusuka eLondon, Ukongeza ukujonga ukungena ngaphakathi 10 imizuzu kunye nenkonzo yokubhukisa iiteksi kubo. okubaluleke kakhulu, Olu hlobo lweTikiti leShishini leNkulumbuso yeEurostar livumela ukuhamba okulula: unokutshintsha kwaye ukhansele uhambo lwakho, ngaphambi kokuba umke okanye uye ku 60 kwiintsuku emva kokumka kwakho, zonke ngaphandle kwemali eyongezelelweyo.
Ngaba ikhona urhumo lwe-Eurostar?
Hayi, Ngokuchasene noko, I-Eurostar ixhaswa kuphela yindawo ukuya kwinqanaba lamatikiti kwaye ayixhaswa naluphi na uhambo lokuhamba, kodwa ukuba uhamba kakhulu nge-Eurostar ungajoyina i-Eurostar Club, Le yinkqubo yokunyaniseka ekubonelela ukuba uqokelele iindawo zokuhamba zoololiwe ukuze ukhulule la manqaku kwitikiti okanye izaphulelo. Ufumana umvuzo 1 khomba ngeyure nganye oyisebenzisileyo kwaye la manqaku anokukunika amalungelo akhethekileyo:
– ukusuka 200 amanqaku: Ufumana amatikiti e-Eurostar ngamaxabiso ancitshisiweyo.
– Ukuba ufumana 500 amanqaku: ungafumana 1 Ukuphuculwa kwenkonzo yoqeqesho.
– Kwaye ukuba ukwazile ukufikelela 1,000 amanqaku: unokukhulula 1,000 Amanqaku kuhambo olujikelezayo nge I-Eurostar ukuya eLondon ukusuka naphi na eNtshona Yurophu.
Ixesha elingakanani ngaphambi kokufika?
Ukufumana i-Eurostar yakho kwaye ube ulungile ngexesha, Uloliwe ucebisa ukuba ufike okungenani 1 iyure ngaphambi kokuba uloliwe wakho we-Eurostar asuke. SiSindisa uloliwe ukusukela oko sahamba kakhulu kuloliwe wase-Eurostar ukuba eli lixesha elaneleyo kwaye ukuba umgca kulawulo lwencwadana yokundwendwela akuyi kuba lide, ungonwabela iivenkile kwaye ufumane ezo zinto uzifunayo Uhambo lukaloliwe ukuze lubhetyebeke kangangoko kunokwenzeka.
ILondon ukuya eMalseilles Oololiwe
ILondon ukuya koololiwe baseMoutiers
I-London ukuya eBourg Saint Traice Trains
Zeziphi iishedyuli zoololiwe ze-Eurostar?
Lo ngumbuzo onzima kwaye omnye oGcina uQeqeshi unokuwuphendula ngexesha langempela, yiya kwiphepha lethu lasekhaya kwaye uchwethe kwimvelaphi yakho kunye nendawo oya kuyo, kwaye unokufumana ezona zichanekileyo Iishedyuli zoololiwe ze-Eurostar nazi, Kukho uloliwe ovela 7 ekuseni ukuya 9 ngokuhlwa uye nakweyiphi na indlela yeEurostar nakwiindlela ezixakekileyo ezinjengeParis ukuya eLondon okanye eLondon ukuya eParis, unezitimela ze-Eurostar ezibaleka iyure nganye enesiqingatha seyure, kufuneka ukhethe ithikithi le-Eurostar elungileyo elifanelekileyo kwishedyuli yakho yokuhamba.
ILondon ukuya eAntwerp itikiti lesitimela
ILondon ukuya eRotterdam itikiti lesitimela
IDisneyland Marne-la-Vallee eya eLondon kwitikiti lesitimela
ILondon ukuya eLitle kwitikiti lesitimela
Zeziphi izitishi ezihanjiswa yiEurostar?
Isikhululo sikaloliwe saseParis seEurostar sithethwa eParis Gare du Nord, isitishi sikaloliwe sikwisithili se-10 seParis, oko ikukuthi +-30 ukuhamba imizuzu ukusuka kwi-Notre Dame's Cathedral. Ukuthatha i-Eurostar, kuya kufuneka ungene esitishini kwaye unyuke 1 umgangatho ngaphakathi kweGare du Nord usebenzisa izifakelo ezikumbindi wesitishi.
KwiDisneyland Paris, I-Eurostar ifika kwisikhululo UMarne La Vallee Chessy, ekhoyo 5 ukuhamba imizuzu ukusuka kwiDisneyland Resort nakwiDisneyland. Kukho indawo yokugcina imithwalo ekhohlo ngaphakathi kwesitishi kwaye ungaya uyonwabele ipaki ngaphandle kokukhathazeka ngempahla yakho exabisekileyo.
E-London, Kule mihla uloliwe weEurostar uyahamba kwaye afike Isitishi samanye amazwe eSt Pancras, ibekwe emantla edolophu yaseLondon. ngaphambi 2007, Oololiwe be-Eurostar basetyenziselwa ukufika kwisikhululo samanzi e-London.
the EBrussels Midi-Zuid (EBrussels kumazantsi) Isikhululo sikumbindi weBrussels, kodwa qinisekisa ukuba uyayiqonda into oyifunayo EBrussels Midi-Zuid kwaye hayi iBrussels Central Station, Isikhululo sikaloliwe saseBrussels Midi-Zuid sine 22 oololiwe beqonga, iofisi yetikiti le-Eurostar imi kufutshane neqonga 8. Itikiti lesitimela lase-Eurostar likuvumela ukuba uhambe ngokukhululekileyo phakathi kweBrussels Midi Zuid kunye neBrussels Central.
Amsterdam Central (Station Amsterdam Central) ikumazantsi edolophu yaseAmsterdam ecaleni komfula, xa uphuma kwisikhululo sikaloliwe, Uyabona iAmsterdam Main Street izele zizinto ezinomtsalane ezinje ngoMadame Tussauds kwaye hayi ukusuka apho nakwisithili sokukhanya okuBomvu. Njengakwizikhululo ezininzi zikaloliwe ezinkulu eYurophu, unayo iidepho zemithwalo ezivula kwangoko kwaye zivaliwe emva kwexesha ukuba ufuna ukundwendwela nje 1 Ngemini okanye ngaphambi kokuba ungene ehotele.
Kwilali, unayo 2 izitishi zikaloliwe ezingakude komnye nomnye, kodwa kufuneka ukhumbule i Isiphelo sendlela ye-Eurostar eLille, i ILille yaseYurophu kwaye ayisiLille Flandres, kodwa nokuba uyakwenza lula ukwenza impazamo, izikhululo zikaloliwe zezi 5 imizuzu ngaphandle komnye.
Isitishi esiPhakathi seAntwerp kulapho ukhwela khona i-Eurostar eAntwerp isixeko esikhulu sesi-2 eBelgium, Ukuba usuka e-Antwerp, sicebisa ukuba ufike kwisikhululo sikaloliwe ixesha elide kunaleyo icetyiswayo 1 iyure ngaphambi kokumka ngenxa yoku Isikhululo sikaloliwe siphumelele amabhaso okuhombisa Uyilo loyilo kwaye lunayo 5 imigangatho kunye intle kakhulu ukuhamba kuyo.
Xa usuka naseRotterdam, uza kube usebenzisa Isikhululo seRotterdam Central okanye kwigama layo lesiSpanish IRotterdam embindini, esi sikhululo sikaloliwe sakhiwe njengendawo yokuthenga encinci ukusuka ngaphakathi ngaphandle, ukuze ukonwabele ukuthenga kamnandi ngaphambi nasemva kwakho Uhambo lwe-Eurostar.
Yintoni endimele ndiyizise kwi-Eurostar?
Ukuzisa ngokwakho kuhambo lwakho lwe-Eurostar kubalulekile, kodwa ngaphezulu kwayo kufuneka uqiniseke ukuba uxwebhu lwakho lokuhamba nge-Eurostar nawe, enye ekufuneka-inepasipoti esemthethweni kwaye ihlala ikho kulungile ukuba ube ne-inshurensi yokuhamba.
Yeyiphi inkampani engumnikazi weEurostar?
Inkampani engumnini weEurostar, igama alimangalisi ngenxa ye-Eurostar International Limited, 55% yeyabaphathi be-SNCF, 30% CDPQ Canada, 10% I-Hermes echithiweyo kunye eseleyo yeyomgaqo kaloliwe waseBelgian, I-SNCB.
I-Eurostar FAQ apho ndingaya khona nge-Eurostar?
Ngaphandle kweParis, eLondon, Amsterdam kunye neBrussels, Rotterdam, kunye noLille, I-Eurostar ikwasebenza imigca yamaxesha onyaka. Ngexesha lehlobo, phakathi kukaJulayi noSeptemba, abanye oololiwe base-Eurostar baya ngqo eAvignon naseMarseilles, Ngexesha lobusika iinyanga, phakathi kukaDisemba no-Epreli, Oololiwe base-Eurostar banokuya ngqo kwimimandla ye-ski kwiiAlps ezinjengeMoutiers okanye iBourg St Maurice eziziidolophu eziphambili ukusuka kwiindawo zokuphumla ezinjengeLaLange, Ukukhetha ezo, Iifonti kunye neVal Thorens.
Zeziphi iinkqubo zokubhoda ze-Eurostar?
Xa ufika kwisikhululo sikaloliwe kunye nendawo ekhethiweyo, uskena itikiti lakho le-Eurostar, Kule mihla abantu bakhetha ukusebenzisa ikhowudi ye-QR, kodwa unakho nekopi elukhuni yetikiti lakho lesitimela kunye nawe kwaye ufumane oku, ke kuya kufuneka uhambe ngokujonga ukhuseleko (ezikhawuleza kakhulu kunakwizikhululo zeenqwelo moya), yiya kulawulo lwencwadana yokundwendwela kwaye uwele umda kwaye emva koko uhamba uhamba ngololiwe wakho kwaye uneendlela ezininzi zeevenkile okanye indawo yokuphumla yaseEurostar, Kule vidiyo ilandelayo ungayibona yonke inkqubo ukusuka xa ufika kwisikhululo sikaloliwe uze ukhwele uloliwe wakho we-Eurostar.
https://www://www.youtube.com/watch?v = Jtx0k4Jw7f4
Zeziphi iinkonzo kwi-Eurostar?
Kukho indawo kuloliwe wase-Eurostar onikezelwe kwiziselo kunye nokukhanya okukhawulezayo koololiwe base-Eurostar, Imenyu ibandakanya iisandwich, Iitshokholethi itshokolethi, okulula, imivalo yetshokholethi, kofu, itshokholethi eshushu okanye iti. Ungatya ke kwaye usele kule ndawo yoololiwe yokutyela okanye uthathe into oyithengileyo kwisitulo sakho. Ungasebenzisa indawo yokubeka umbane ecaleni kwesihlalo sakho koololiwe be-Eurostar.
Ndifika kanjani eLondon St. I-Pancras International ukuthatha uloliwe we-Eurostar?
Njengazo zonke iimfuno zothutho eLondon, ukusebenzisa iLondon ephantsi komhlaba ukuya kwisikhululo samazwe aphesheya eSt Pancras yeyona ndlela ilula. Imigca emithandathu eyahlukeneyo engaphantsi komhlaba ifikelela kwiSikhululo seKing Cross kunye ukusuka apho ungahamba ngeenyawo ukuya eSt Pancras International kwimizuzu nje embalwa. ILondon St Pancras International ikwimizuzwana nje ukusuka kwisikhululo sikaloliwe i-Euston ukuba uza kuvela kuMzantsi weLondon.
Ngaba kunokwenzeka ukuthatha oololiwe be-Eurostar phakathi kweLondon neAmsterdam?
Ukususela ngo-Epreli 2018, enkosi kwi-Eurostar, Ungahamba phakathi kweLondon neAmsterdam malunga 3-4 iiyure, kwaye akukho mfuneko yokutshintsha oololiwe eBrussels nangona abanye boololiwe base-Eurostar ukusuka eLondon ukuya eAmsterdam, bayamisa eBrussels, kodwa oko kuxhomekeke kwitikiti le-Eurostar olithengayo.
Eyona mfuno iceliweyo ye-Eurostar – Ngaba kufuneka ndibhukishe isitulo kwangaphambili kwi-Eurostar?
Xa uthenga itikiti le-Eurostar lesitimela, isihlalo siya kwabelwa ngokuzenzekelayo xa usenza ukubhuka. Kwaye ukuba kukho izihlalo zasimahla xa uloliwe, uvunyelwe ukuba ujikeleze ukuze ufumane indawo eyahlukileyo.
Ngaba kukho i-intanethi ye-WiFi ngaphakathi kwe-Eurostar?
Unokonwaba Intlawulo ye-Intanethi ye-WiFi yasimahla kuzo zonke izitimela ze-Eurostar kwaye zonke iiklasi zokuhamba xa uthenga amatikiti e-Eurostar kwangaphambili.
Ukuba ufikelele ngoku, Uyazi yonke into oyifunayo malunga noololiwe bakho base-Eurostar kwaye bakulungele ukuthenga itikiti lakho lohambo lwe-Eurostar GcinaATrain.com
Ngaba uyafuna ukumisela eli phepha kwindawo yakho? Cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-eurostar%2F%0A%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela), Okanye unokuxhuma ngqo kweli phepha.
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml kwaye ungatshintsha i / pl kwi / nl okanye / fr kunye nezinye iilwimi.